Covid-19 tareen Travel Industry tali On safarka | Save A tareenka
Home > Tilmaamaha Tareenka Safarka > Covid-19 tareen Travel Industry tali On safarka
Covid-19 tareen Travel Industry tali On safarka
Waqtiga Akhriska: 6 daqiiqo
Covid-19. Waa wax uun aan u muuqan karno inaan ka hadalno, iyo sabab wanaagsan. virus Tani ayaa qabsadey dunida iyo sida aan u fekero nolol maalmeedka iyo dabcan in Tareenku Travel gabi ahaanba beddelay. Tareen Travel waa a hab gaadiidka isticmaalka badan ma ahan oo keliya, waayo, waxaan jeclahay oo fasax, laakiin safaro shaqo iyo sidoo kale.
Sidaas, Waa Maxay The Kula tali in Tareenku Travel Industry On safarka?
Aynu wada hadlaan waxa warshadaha tareenka ay ka qabanayso si lagaaga dhigo mid ammaan. Inta badan xarumaha tareenka ayaa xoojinaya borotokolkooda nadaafadda ee tareennada iyo saldhigyada. Ka sokow sii xoogeysaneyso nadiifinta, inta jeer ee tareenada iyo saldhigyada ayaa sidoo kale kor u kacay. Nadiifintu waxay dhacdaa saacadle ahaan waxayna kujirtaa isticmaalka jeermiska tirtirida gacmaha, shidista, gacanka, iyo musqulaha. waxyaabaha bakteeriyada dheeraad ah, oo ay ku jiraan gacmo nadiifiyaha oo masarka, waxaa la siiyaa at saldhigyada, tareennada, iyo meelaha shaqada ee shaqaalaha.
Tareen Travel Industry tali On Talo safarka 1: Online Payment
Waxaan ku talineynaa socday 100% contactless haddii aad awoodid. Haddii aadan soo iibsaday aad tigidhada tareenka online waayo, wax kasta sabab, socday weeraryahanka lacagta waa in ay ahaataa contactless haddii ay suuragal tahay. maxaad? Well, waxaa jira qaar ka mid ah farriimo isku dhafan. Tani waa waxa ugu Bank of England ayaa sheegay in: "Like dusha kasta oo kale oo tiro badan oo dad u soo galeen xiriir la, qoraalada qaadi karaan bakteeriyada ama fayrasyada. Si kastaba ha ahaatee, khatarta ay keeni karaan qabashada note polymer waa weyn ma jiro oon ahayn taabashada wax caadi ah oo kale meelaha sida la cuskado, shidista, ama kaararka amaahda. ” Horaantii bishan Warbixinta wargeyska a ayaa sheegay in Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) lahaa raso yiri waxaa laga yaabaa in faafo coronavirus ah, sidaas darteed dadku waa in ay isku dayaan in ay isticmaalaan lacagta contactless halkii. Laakiinse haddana waxaa la sheegay in WHO ay beeniyay in ay sheegay in lacag caddaan ah waxaa loo gudbin coronavirus ah, iyo in ay ahayd "been" - si tegi tiradaasi.
Si kastaba ha ahaatee, aynu wada laba iyo laba, waxaana? qoraalada iyo Shilimaad Inta badan horay loo maareeyay doonaa by tiro badan oo dadka , sidaa darteed haddii aad ka welwelsan tahay, bixinta kaarka contactless ah halka ay suurto gal u badan tahay waa jidka si ay u tagaan.
Milan ilaa Rome by Tareenka
Naples ilaa Rome tareenada
tip 2: Bulsho kala fogeyn!
Kala fogeyn bulshada ka dhigan tahay NO fogaynayso xaalad kasta. laakiin, waxa ku saabsan tareenada sarreysa, tuubooyinka, iyo trams?
Qof kasta oo si joogto ah loo isticmaalo in Tareenku Travel ogaan doontaa in ay adkaan karto in uu sii joogo dhowr cm a iska ay ka rakaabka ku xiga, iska ilow 1m lagu taliyey. In Milan, rakaab ah ayaa lagu talinayaa in ay ka soo hor jeedda kursiga madhan fadhiisan, wax ka mid ah oo rakaab ah in magaalo oo kale oo ku mashquulsan inta badan ku riyoon karaan oo kaliya.
Mid ka mid ah Safarka Tareenka ee aadka ugu mashquulsan magaalooyinka waa London. Transport for London bandhigay ah "habaysan nidaam nadiifinta" si loo horumariyo heerka nadaafadda on ee caasimada ah gaadiidka dadweynaha, laakiin waxba si uu u dhaqan bulsho kala fogeynta. Tani waa inaad. Guntii iyo gunaanadkii waa inaad u baahato inaad iska ilaaliso taabashada dadka kale. Safarka waqtiyo yar mashquul haddii ay suuragal tahay, xidho gacno gashi hadii aad ma ka hortagi kartid taabashada biraha, kursi, iwm. Qaad aad jeermiska u gaar ah kula. Ha ku tiirsan Stations tareenka si ay u bixiyaan idiin waqtiyada oo dhan. Better amaan badan ka xumahay!
Amsterdam ilaa Paris by Tareenka
London ilaa Paris by Tareenka
Rotterdam ilaa Paris by Tareenka
Brussels ilaa Paris tareenada
tip 3: ma samayn Isticmaalka caago Cups!
The Tareen Travel Industry tali on safarka ka mid ah Hanuuniyaa ee yeela iyo ma iyo cuppa aad ugu jeceshahay samayn. Iyadoo is geliyey caado ka siday oo isticmaalaya koob caago marka baxay oo ku saabsan ayaa lagu dhiirigelinayaa sidii dhaqaaqo bey'ada miyir ah, nahay cabsan this mar dambe khuseysaa.
silsilado badan oo qaxwaha badan oo haysta Rethink a jawaab u dillaacay coronavirus, la Starbucks si ku meel gaar mamnuucay isticmaalka koob isticmaali karo - sida caadiga ah ka samaysan caag ah, galaas, ama wax bamboo ah - badbaadada macaamiisha iyo shaqaalaha labadaba. Sida caadiga ah, waxaa lagaa qaadayaa qiimo dhimis ah inaad keento koobkaaga, laakiin ma laga yaabaa in aad ka hesho jawaab la mid ah hadda! Aad ku socoto in ay si lumiyo in dhimis yar ammaanka daraaddiis.
Brussels illaa Amsterdam by Tareenka
London ilaa Amsterdam by Tareenka
Berlin ilaa Amsterdam ee Tareenka
Paris illaa Amsterdam by Tareenka
tip 4: Ha taabanina!
Dad badan ayaa weydiinaya haddii qaadashada tareenka macnaheedu waa halis ka badan oo cudurka. Jawaabta oo gaaban waa in haddii aad on tareen iyo gudahood fadhiya 1-2 mitir ee qofka qaba kuwaas oo uu qufaco, aad halis ugu jiraan cudurka.
Laakiin waxa aan u malaynayaa waa more muhiimka ah in la tilmaamo in halista badan tahay waa fayraska usugnaaday waayo, 48-72 saacadood uu saaran yahay meel adag, sida gacan-qabsi. Taasi ma khuseyso oo kaliya in ay Tareenadu in kastoo. Waa meel KASTA dadweynaha.
Haddii aad leedahay inay taabtaan biraha, badhamada, tigidhada, iyo wixii la mid ah, isku day in aad u samayn hal gacanta ama ka fiican marka la, suxulkaaga! Ka dhig telefoonada gacanta kale "nadiif" iyo labada ku dhaq sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awoodo meesha aad u socoto.
Nuremberg ilaa Prague by Tareenka
Munich ilaa Prague by Tareenka
Berlin ilaa Prague by Tareenka
Vienna to Prague by Tareenka
tip 5: Safarka By tareenka!
Haddii aad ku socoto in ay safarka, ha ahaadeen tareenka. Waxaan sii kordheysa maxaa yeelay, ma celinta on safarka hawada, halka safarka tareenka-bedbedel badan leh. shuruudaha caadiga ah iyo xaaladaha codsan u muuqdaan in ay noqon badan oo ka mid ah jawaabaha diyaaradaha. "Waxaa hadda jira waa isbeddel lahayn in ay talo diyaaradaha, sidaas duulimaad waxaa ka hawlgala sida shuruudaha iyo xaaladaha tikidhada caadiga ah iyo heerka sii si aad u dalbato,"Ayaa sheegay in easyJet.
Qaar ka mid ah shirkadaha diyaaradaha horjeeda yihiin in ay ka badan jaan. British Airways bixinayaan degree ah dabacsanaan on duulimaadyo waqooyiga Italy, halka airline ay walaasheed Kor Lingus waa mid wanaagsan oo ballan la aadin: "Martidu kaasoo sameeyey jaale on aerlingus.com oo doonayo in la beddelo taariikhaha ama dalal ka mid ah duulimaadyada ay soo socda si samayn karo."
Frankfurt ilaa Berlin by Tareenka
Leipzig ilaa Berlin by Tareenka
Hanover ilaa Berlin by Tareenka
Hamburg ilaa Berlin by Tareenka
tip 6: Boorso fudud Your Own!
Boorso fudud adiga kuu gaar ah haddii aad u safraya tareen. Tareenno badan ayaa yeeshay si ku-meel-gaadh ah u xidheen aaggooda Fasalka Koowaad oo laga saaray cuntada xagga cuntada. Sidaas, waqtiga si aad u hesho hal abuur leh lunchboxes aad! khafiifa ama gadashada adiga kuu gaar ah ka dukaamada cuntada saldhigga qaado ka hor inta aadan fuulaysid. Talaabooyinkani waxay yihiin dabcan, loogu talagalay in aad loo ilaaliyo iyo in la yareeyo fiditaanka fayraska COVID-19 ah!
Milan ilaa Venice tareenada
Padua ilaa Venice tareennada
Bologna ilaa Venice by Tareenka
Rome ilaa Venice tareenada
Waxaan ognahay in ay tani waa waqti cabsi. laakiin, waxaan kugu dhiirigelinaynaa in ay is dajiyaan oo macquul ah in aad hab in caafimaadka iyo badbaadada marka tareen ama siyaabo kale u safraya. at Save A tareenka waxaana naga go'an in ay hubiso in macaamiisha oo dhan iyo shaqaalaha waxaa lagu hayaa ammaan ah oo jira ilaa taariikhda oo dhan nidaamka badbaadada iyo horumarkii ugu dambeeyay.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog “Covid-19: Sidee Tareen Travel Industry tali On safarka?” gal your site? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit leh link in post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fcovid19-train-travel-industry-advise%2F%0A%3Flang%3Dso የሰማይ አካላት- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
In link soo socda, waxaad ka heli doontaa our jidadka tareenka ugu caansan – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- link this waa wadooyinka Ingiriisi bogagga degtey, laakiin waxaan sidoo kale leeyihiin https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, oo waxaad bedeli kartaa PL inay fr ama de iyo luqado badan oo aad dooratay.
Coronavirustravel covid19 Ammaanka tareen safarka